Wasiirka Seychelles ayaa bogaadiyay hagaha dalxiiska si ay ugu heelan yihiin dalxiiska guusha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Wasiirka Seychelles ayaa bogaadiyay hagaha dalxiiska si ay ugu heelan yihiin dalxiiska guusha
Wasiirka Dalxiiska Seychelles oo la kulmay hagaha dalxiiska
Kulan ka dhacay guriga Botanical House Jimcihii, Ogosto 27, 2021, oo ay la haayeen dalxiisayaal si wax looga qabto arrimaha khuseeya ganacsigooda, Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska, Sylvestre Radegonde wuxuu muujiyey sida uu ugu qanacsan yahay, sida saaxiibbada kale, kooxdan dalxiiska xirfadleyda waxaa ka go'an inay guuleystaan ​​warshadaha.
Ajandaha waxaa ku jiray walaac ay soo jeediyeen hageyaasha dalxiiska.
Wasiir Radegonde ayaa u xaqiijiyey hagaha dalxiiska in Waaxda Dalxiisku ay si dhow ula shaqayso dhowr hay’adood si wax looga qabto arrimaha kala duwan ee ay la tacaalayaan.
Kuwaas waxaa ka mid ahaa soo saarista badeecooyin si loo soo jiito dadka soo booqda si ay u sahamiyaan adeegyada kala duwan iyo soojiidashada la heli karo, nabadgelyada, canshuuraha u dhexeeya jasiiradaha booqdayaasha, iyo qaar kaloo badan.
Wasiir Radegonde wuxuu yiri, “Hal shay oo ku soo noqnoqda kulamada aan la yeelanno shuraakada waa u heellanaanta guusha warshadeena. Waan ku faraxsanahay inaan dhammaanteen u muuqanno inaan isku bogga nahay meesha aan jeclaan lahayn in warshadan ay tagto. ”
Ajendaha looga doodi doono kulanka oo ay ka soo qeybgaleen Xoghayaha Guud ee Dalxiiska (PS), Sherin Francis, iyo xubno kale oo ka tirsan waaxda, ayaa ahaa tabashooyin ay soo jeediyeen hagayaasha dalxiiska iyo wadaagga xalal hal abuur leh si wax looga qabto caqabadaha hadda jira ee waaxda waa soo wajahay. Kuwaas waxaa ka mid ahaa soo saarista badeecooyin si ay u soo jiitaan dadka soo booqda si ay u sahamiyaan adeegyada kala duwan iyo soo jiidashada laga heli karo meesha loo socdo, tasiilaad la'aanta, amniga, canshuuraha u dhexeeya jasiiradaha booqdayaasha, xeerarka iyo welwelka deegaanka sida wasakhowga.
Wasiir Radegonde ayaa u xaqiijiyay hoggaamiyeyaasha dalxiiska ballanqaadka wasaaraddiisa iyo ka qaybqaadashadiisa, isagoo xaqiijiyay in Waaxda Dalxiisku ay si dhow ula shaqaynayso dhowr hay’adood si wax looga qabto arrimaha kala duwan ee ay wajahayaan iyo sidoo kale sidii fursado loogu abuuri lahaa ganacsiyo kale oo faa’iido leh oo ka dhex jira warshadaha dalxiiska.
“Waaxda Dalxiiska waxay kala xaajoonaysaa Xafiiska Duqa Victoria iyo Waaxda Dhaqanka, iyo kuwa kale, si loo hubiyo in caasimadeena yar iyo meelaha kale ee soo jiidashada ay siiyaan waayo -aragnimo qowmiyadeed oo dhab ah oo soo -booqdayaashayada ah. Qaar ka mid ah walaacyada ay muujiyeen hageyaasheena dalxiiska ayaa hadda waxaa wax ka qabta waaxdeena iyada oo loo marayo qeybaha mas'uulka ka ah iyo inta kale ee arrimaha aan la kulanno, doodaha kuwan oo kale ah siiyaan goob lagu helo xalal istiraatiiji ah oo wadajir ah, ”ayuu yiri Wasiir Radegonde.
PS Francis ayaa dhankeeda sheegtay in wada hadalku uu ku dhacay waqtigii loogu talagalay taas oo u saamaxday kooxdeeda inay aqoonsadaan arrimaha muhiimka ah ee saameynaya hagayaasha dalxiiska ee maxalliga ah iyadoo la waafajinayo mudnaanta Waaxda Dalxiiska ee horumarinta alaabada cusub ee warshadaha.
“Kulankani wuxuu iftiimiyay qodobo badan oo ka dhigi kara meesha loo socdo mid ka suuq badan iyada oo loo marayo soo jeedinta labada dhinac. Dhinaceena, waxaa naga go'an inaan la shaqeyno hageyaasheena dalxiiska si aan kor ugu qaadno araggooda iyada oo loo marayo mareegaha aan u soconno iyo aaladaha kale ee suuqgeynta. Waxay dhiirri -gelinaysaa in hadafkayaga guud uu yahay inaan horumarinno khibradda booqdaha, sida oo kale Waaxda Dalxiiska ayaa iyaduna bixineysa taageeradooda mashaariicda kala duwan ee aan hadda wadno si aan u buuxinno daldaloolada jira ee badeecadahayaga, ”ayay tiri Marwo Francis.
Seychelles ayaa tirinaysa 89 hage dalxiis oo madaxbannaan oo aamin ah oo ka hawlgala agagaarka Mahé, Praslin iyo La Digue.